2013-04-14 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Burning - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
PowerISO ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးပါ လိုအပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ................
Download=>solidfiles (or) zippyshare (or) fileswap
IN Cleaner - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ Update ထွက်တိုင်း တင်တင်ပေးနေလို့ အားလုံးလည်းသိပြီး ဖြစ်မှာပါ..။ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ Browser တွေကို အမှိုက်တွေရှင်း၊ သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် Registry Error တွေကိုပါ Repair ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ၊ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတိုင်း စက်ကို Restart ချပေးပြီးမှ ဆက်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လေးနေ၊ ဟမ်းနေတဲ့ စက်တွေဟာ အရင်ကထက် ပိုမိုသွက်လက်မြန်ဆန်လာတာကို လက်တွေ့မြင်တွေ့ ရမှာပါ..။ အသုံးပြုဖူးသူတိုင်း စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေတဲ့ System Tool လေးတခုပါ..။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖရီးပေးသုံးတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Final ဗါးရှင်းလေးပါ..။ လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 22 MB ရှိပါတယ်..။ ဒီလို System Tool လေးတွေကို အသုံးမပြုခင် Restore Point တခု အရင်ဖန်တီးထားပြီးမှ အသုံးပြုပေးပါ..။ အသုံးပြုပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း မိမိတို့ရဲ့စက်ကို Restart ချပေးပြီးမှ ဆက်ပြီးအသုံးပြုပါ..။ ဒါဆိုရင် အယ်ရာမျိုးစုံ ကင်းဝေးပြီး စက်ကလည်း သွက်လက်မြန်ဆန်နေပါလိမ့်မယ်..။License Keys ထည့်မယ်ဆိုရင် အင်တာနက် Connection အရင်ပိတ်ပြီးမှထည့်ပါ~~
Download=>solidfiles (or) dropbox (or) fileswap
Supporting Operating Systems : Windows XP, Vista,7and 8
PDF စာအုပ်လုပ်ချင်သူများနဲ့File Format အမျိုးမျိုး ပြောင်းဖို့ ဆော့ဝဲ
IN Software - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးက စာစီစာရိုက် လုပ်ထားတဲ့ စာတွေ ပုံတွေ အများကြီးကို စာအုပ်လုပ်ချင်
သူများအတွက် အလွယ် ပြုလုပ်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ တစ်ခုထပ်ပြီးပိုသာလာတာက
ဖိုင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းရတာ လုပ်ပြီးသား စာအုပ်တွေWater mark ပြန်ထည့်ချင်လည်း အဆင်ပြေတယ်အသုံးပြုပုံဖတ်ပြီးလိုအပ်ရင်အောက်ကလင့်မှာ ယူလိုက်ပါခင်မျာ...............
Download=>fileswap (or) zippyshare (or) box
Loaris Trojan Remover 1.2.8.3 with Crack Full Version
IN Antivirus - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
Trojan, Spywar,Malwar,Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး အထိရောက်ဆုံး ရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့်
Software တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး..Virus Update ပုံမှန်ပြုလုပ်လို့ရပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ Networkကိုနှေးကွေးလေးလံစေတဲ့ အဖျက်အမှောင့် Virus တွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပေးမှာပါ Antivirus တွေနဲ့လည်းတွဲသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်အခြားအသုံးဝင် Feature များစွာလည်းပါဝင်ပါတယ်
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ....
Trojan Remover aids in the removal of Malware -Trojan Horses, Worms, Adware, Spyware - when standard anti-virus software either fails to detect them or fails to effectively eliminate them. Standard antivirus programs are good at detecting this Malware, but not always good at effectively removing it. The majority of Anti-Malware Scanners are well able to detect malicious software - Trojan Horses, Internet Worms, Adware/Spyware etc. - but are not always efficient in removing them once they have been triggered.
IN Internet Tools - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
Skype အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တော်ကီပွားထားသမျှ ဗီဒီယိုချက်ထားမျှကို
အမှတ်တရလေးသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် EvaerVideoRecorder လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဒီမှာ လေ့လာပြီး ကြိုက်ရင် အောက်ကလင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ..............
Download=>solidfiles (or) dropbox (or) box
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်ချင်တဲ့ (လက်ကွက်ကျင့်လိုသူ) တွေအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ
IN Typing software - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်ချင်တဲ့ (လက်ကွက်ကျင့်လိုသူ) သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ...။
Install လုပ်စရာမလိုဘဲ double Click နှိပ် Run ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Download=>solidfiles | fileswap | zippyshare
IN Cleaner, Software - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုလေးတွေမှာ Watermark ထည့်ဖို့ Video Watermark Pro
IN Software, Video Editing - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့စာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ် Watermark
ထည့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ Watermark အဖြစ် စာတွေတင်မဟုတ်ပဲပုံလေးတွေ Shape လေးတွေပါ ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ
Download=>solidfiles | fileswap | dropbox
အထဲမှာ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ပါတယ်တယ် အပြင်ကဖိုင်ကို Install လုပ်ပြီးရင်
keygen ဆိုတဲ့ထဲကဖိုင်ကို C >> Program files >> AoaoPhoto digital Studio >> Video Watermark pro
ဆိုတဲ့ဖိုလ်ဒါထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါ တက်လာတဲ့ Box ကို Replace ပါတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အရင်ဆုံး ပရိုဂရမ်ကို Run လိုက်ပြီး .. ဘယ်ဖက်အပေါ်ဒေါင့်နားက အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီး
ကိုယ် Edit လုပ်မယ့် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ရွေးပေးရပါမယ်
ပြီးရင် စာထည့်မလား ပုံထည့်မလား ရွေးပြီး Add Text .. Add Image .. Add Shape တစ်ခုခုကိုနှိပ်ပေါ့
ပြီးရင်တာ့ ကိုယ်လုပ်တာကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီး Ok နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Run ဆိုတဲ့ အ၀ိုင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် .avi ဖိုင်အဖြစ် Output ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်
၀က်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းယူထားပြီး Offline မှာလေ့လာဖို့ Inspyder Web2Disk 3.2.5
IN Software, နည်းလမ်းများ - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ဒီဆော့ဝဲက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အဲဒီဝက်ဆိုက်ထဲက ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီကို Download ယူထားပြီး အင်တာနက်လိုင်းမရှိပဲ Browser နဲ့ဖွင့်ပြီး အင်တာနက်ရှိနေတဲ့အတိုင်း လေ့လာလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ
Download=>solifiles \_ fileswap \_ dropbox
လွယ်ကူ ရိုးရှင်း၊အဆင့်မြင့် ရုပ်/သံ တည်းဖြတ်ခြင်း နည်းပညာ (မြန်မာလို)
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
Power Director ကိုအသုံးပြုပြီး
Effect အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းနည်း Text Effect တွေ အသုံးပြုနည်း ကားကူးကားဆက် Editing လုပ်နည်းတွေကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရှင်းပြထားပါတယ် .... Video Editing ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
Download=> solidfiles (or) fileswap (or) dropbox
Wise Care 365 Pro နှစ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Latest Version ပါ။
System error တွေရှင်းပေးမဲ့ software လေးပါ။ Latest Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါ
ပါတယ်။သူစွမ်းဆောင် ပေးမဲ့အရာတွေကို အောက်မှာကြည့်ပေးပါ။တစ်ခုထဲ့နဲ့အသုံး
တည့်တဲ့ Software လေးပါ။
Size ~ 7.73 MB
IN windows 8, နည်းလမ်းများ - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
Windows 8 Built inပါတဲ့ Lock Screenကို အသုံးပြုရတာ မကြိုက်လို့ ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အသုံးပြုနည်း နှစ်မျိုး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းကတော့ Local Group Policy Editorထဲက သွားပြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Local Group Policyထဲကို မသွားတော့ Notepadကနေ Registryကို ပြင်ဆင်တဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး Local Group Policy Editorထဲကနေ သွားပြင် ကြည့်ရအောင်။
ပထမနည်း 1။ Run Boxမှာ Gpedit.mscလို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။
2။ Local Group Policy Editor ကျလာရင် Computer Configurationအောက်က Administrative Tamplateကို သွားပါ။
3။ ပြီးရင် Control Panel အောက်က Personalization ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်Do not Display the Lock Screen ဆိုတာကို Double Click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Boxထဲမှာ Enableကို ရွေးပြီး Apply Okကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
1. အရင်ဆုံး Notepadကို ဖွင့်ပါ။ Notepadကို ဖွင့်ဖို့အတွက် Runမှာ Notepadလို့ ရိုက်ရင် ရပါတယ်။
2. Notepadကို ဖွင့်ပြီးရင် အောက်ကစာတွေကို ကူးရေးလိုက်ပါ။
3. စာတွေ ကူးရေးပြီး File Saveမယ်ဆိုရင် Save Nameကို ကြိုက်ရာပေးပြီး Save Nameရဲ့ နောက်မှာ .reg ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
(ဥပမာ) Disable Lock Screen.regဆိုပြီး Save လိုက်ပါ။ အားလုံး ပြီးပြီဆိုရင် ရလာတဲ့ Registry Fileကို Run ပေးလိုက်ပါ။ Registry Boxလေး ပေါ်လာရင် Yesကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Lock Screen ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Credit Myanmar ICT Journal
IN ဗဟုသုတ, အထွေထွေ - ON Saturday, April 20, 2013 No comments
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် (81)
မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (64)
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး (61)
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံး (52)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသ်ိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ (52)
ပို့ ဆောင်ရေး (50)
Myanmar Info Tech (44)
စက်မှု (၁) (42)
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး (16)
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား (15)
ရထားပို့ ဆောင်ရေး (14)
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း (13)
စက်မှု (၂) (12)
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး (9)
7 Day ဂျာနယ် (198)
Express Times (198)
HOTNEWS ဂျာနယ် (183)
စွယ်စုံ မီဒီယာ (153)
Eleven Media Group (152)
The Voice (143)
The Yangon Times (136)
Popular Myanmar (127)
Messenger News (117)
Myanmar Times (105)
My Suboo (98)
Today Media (96)
Myanmar Independent Journal (95)
ရတီ စာပေအနုပညာမဂ္ဂဇင်း (93)
The Myanmar Post (90)
People Online (88)
Planet Media (88)
မော်ဒန် သတင်းဂျာနယ် (85)
ဒီလှိုင်း ဂျာနယ် (83)
Mobile Guide (80)
Myanmar Journal Download (76)
ပြည်သူ့ ခေတ် ဂျာနယ် (68)
Venus News Weekly (58)
Do it Yourself Journal (57)
Yangon Media (55)
Focus Online Journal (52)
English သတင်း ၀ဘ်ဆိုက်များ
Bangkok Post (58)
Channel News Asia (50)
World Street Journal (47)
VOA English (45)
Radio Free Asia (43)
BBC English (42)
The Droid Guy (33)
Extreme Tech (26)
The Straits Times (17)
ကချင်နေ့ စဉ်သတင်း (252)
Myanmar Express (197)
Opposite Eyes (162)
ယနေ့ မြန်မာ (116)
Myanmar Local News (103)
နေ့ သစ် (71)
7 Day Shopping (94)
City Mart (27)
Myanmar Online Sales (19)
Techno Park Group (17)
MM Biz Portal (9)
Young investment group (1) *
Work Com (137)
Myanmar Best Job (121)
Myanmar Job Search (94)
My Jobs (20)
Job for MM (11)
KBZ Bank (108)
CB Bank (66)
AGD Bank (17)
ရတနာပုံ WebPortal (107)
MWD Digital TV (28)
သူရိယ သတင်း (10)
Mandalay Gazette (74)
BBC Burmese (57)
All Channel News (1) *
Tech Space Journal (84)
Elite Tech (76)
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် (71)
Mystery Zillion (50)
မြန်မာအိုင်အာစီနှင့် မြန်မာစကားဝိုင်း (45)
Myanmar ISP (15)
7 Days Tour (68)
Adventure Myanmar (53)
Sun Far Travel and Tour (44)
Exotic Myanmar Travel (41)
Green Palace Myanmar (41)
Explore Myanmar (39)
Nature Link (29)
Thousand Islands (24)
Air Mandalay (10)
Air KBZ (9)
MAI Air Line (9)
Air Bagan (8)
Yangon Airways (7)
Motors Com (494)
Diamond Auto (160)
Myanmar Used Car (132)
၀န်းရံခ Car Sale Center (105)
Myanmar Cars Market (101)
Best Auto (87)
Golden Dragon Trading (75)
Delux Trading (68)
Myanmar Cars DB (48)
SNO Car Rental (40)
Vehicles Myanmar (23)
ရောင်နီဦး (3) *
Time (3) *
Win Ko Trade (2) *
MV Tech (2) *
Soccer Myanmar (108)
Myanmar Football Federation (99)
Live Score (80)
Myanmar National League (68)
Myanmar Training (56)
Myanmar Noble College (53)
Totel School (53)
MM Care Forever (2) *
Golden Crown Enginnering (2) *
Burmese Classic (1) *
Shwe Dream (1) *
ရွှေအိုး (1) *
All Channel Movies (1) *
Myanmar MP3 (1) *
All Channel Music (1) *
MM Music Online (1) *
Myanmar Songs (1) *
MyitZuRi (1) *
Flash Band (1) *
ညကဗျာ (1) *
လိုတရ (1) *
Shwe Videos (0) *
Myanmar Movie (0) *
MM Life MP3 (0) *
အရိုင်းပန်း (0) *
Burmese MTV (0) *
Online Melody (0) *
Myanmar Online Music (0) *
Ads Com (96)
AD Innwa (41)
အိမ် ၊ခြံ ၊မြေ
Estate Myanmar (116)
Myanmar Housing (104)
Shwe Property (90)
Good Health (145)
HIV information for Myanmar (60)
Wutyee Food House (51)
Myanmar Technology Gateway (41)
Web Host MM (38)
MM Web Pro (35)
Shwe Hosting (34)
Aero Tech MM (22)
ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ (49)
MM Astrology (1) *
MM Astro (0) *